China Girl's padded jacket (အရှည်ရှည်ပုံစံ) FH20-047 စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | ကျိုင်းတုံ
ဤစတိုင်သည်နူးညံ့။ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးလေကာယာနှင့်နွေးထွေးသောကြေးနီပိတ်ထည်ကိုအသုံးပြုသည်။ ဘဲဥပုံရွှေရောင်အစက်သည်သာမန်အစက်များထက် ပို၍ ဖက်ရှင်ကျသည်၊ မျက်စိကိုဖမ်းစားနိုင်ပြီးမလွယ်ကူပါ၊ ကလေး၏တစ်နှစ်ပြည့်နှစ်၊ ရိုးရှင်း။ တိုက်ရိုက်ပုံစံဒီဇိုင်း၊ အလွယ်တကူချွတ်ယူနိုင်ခြင်း၊ ၀ တ်ဆင်နိုင်ခြင်း၊ တူညီတဲ့အရောင်နှင့်အလွန်ပျော့ပျောင်းသောယုန်ဆံပင်, နွေးထွေးမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးရုံသာမကကလေးသူငယ်ပျော်စရာနှင့်ဖက်ရှင်နှင့်ပြည့်ဝ၏။ ၀ တ်စုံတစ်ခုလုံးသည်အရည်အသွေးမြင့်ချည်နှင့်ပြည့်ပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့။ ပျော့ပျောင်းသည်၊ အထူအလယ်အလတ်၊ နွေးထွေးသည်။ ခန္ဓာကိုယ်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိလိုင်းများသည်သပ်ရပ်ပြီးထူးခြားသည်။ ၎င်းသည်ချည်ကိုခိုင်မြဲစွာသော့ခတ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည် run ရန်မလွယ်ကူပါ! ခါးတွင်ရှိသောဤအထည်၏ရိုးရှင်းသော elastic ခါးပတ်သည်ခါးပိတ်ခြင်း၏အခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်ရုံသာမကဖက်ရှင်ကျသည့်ရွှေခလုတ်များဖြင့်လည်းကိုယ်ထည်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ချုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ အလွန်အေးမြသည်။ မဝင်ရ! နှစ်ဖက်စလုံးမှအချိုးကျဂျပန်ပုံစံအိတ်ကပ်ရိုးရှင်း, ရက်ရက်ရောရောလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်လှပသောဖြစ်ပါတယ်။ အလယ်အလယ်ရှိရွှေခလုတ်သည်ထည်ပေါ်ရှိရွှေအစက်ကိုပဲ့တင်ထပ်သည်။ placket ပေါ်တွင်ရှိသောဇစ်သည်ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပလတ်စတစ်သွားသွားချည်သံကို အသုံးပြု၍ လက်ရာမြောက်သောလက်ရာများဖြင့်ပုံသွင်းရန်လွယ်ကူသည်၊ ချောချောမွေ့မွေ့ဆွဲယူလွယ်သည်။ ဒါဟာဖက်ရှင်နဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။ ဆွဲခေါင်း၏ပုံသဏ္speciallyာန်သည်အထည်ချုပ်မျက်နှာပြင်ရှိဘဲဥပုံအစက်နှင့်တူညီစေရန်အထူးရွေးချယ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည် ၀ တ်စုံတစ်ခုလုံးကိုစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းပြီးလှပစေသည်။ စားဆင်ယင်မှုတစ်ခုလုံးသည်ရိုးရှင်းပြီးလေထုဖြစ်သည်။ ၀ တ်စုံတစ်ခုလုံး၏အတွင်းပိုင်းသည်ချောမွေ့ပြီးအရောင်အပြည့်ဖြင့်၊ အလင်းနှင့်ပူနွေးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်အတွက်ကှနျ့၏လျှောစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောလေထုဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောအပူဆုံးရှုံးမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်ရန်အတွက်အဆင့်မြင့်ကှနျ့ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပွုထားသညျ။
အဝတ်များ၏ပါးပျဉ်းဒီဇိုင်းလေတိုက်နှုန်းနှင့်နွေးသည်။ အပူချိန်မြင့်မားစေရန်အတွက်ဖက်ရှင်နှင့်ချောမွေ့သော plush ကို ဦး ထုပ်တွင်အသုံးပြုသည်။ အိတ်ကပ်သည်ရိုးရှင်းပြီးလက်တွေ့ကျသည်၊ ၎င်းသည်အဆင်ပြေပြီးလက်များကိုနွေးနိုင်သည်။ တံခါး၏ကျယ်ပြန့်သောအရှေ့လေသည်ကာကွယ်မှု၏အခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ အောက်ခြေကိုဖုံးကွယ်ထားသောခလုတ်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည်လှပပြီးအဝတ်များ၏ပုံစံတစ်ခုလုံး၏သမာဓိကိုထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ Placket ၏ဇစ်သည်ပလတ်စတစ်ကွင်းဆက်ကိုချောမွေ့စွာပုံသွင်း။ မရပေ။ cuffs ၏နံရိုးဒီဇိုင်းသည် windproof နှင့်နွေးသည်။ နူးညံ့ပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသည်။ ဦး ထုပ်၏အနားစွန်းပေါ်ရှိအရောင်နှစ်ရောင်ရှိသောဆံပင်သည်နူးညံ့ပြီးချောမွေ့သည်။ ဆံပင်၏အရောင်သည်လတ်ဆတ်။ ကြော့ရှင်းသည်။ တော်ဝင်မင်းသမီးစတိုင်နဲ့ပြည့်နေတယ်။ အဝတ်၏အတွင်းပိုင်းချောမွေ့ပျော့ပျောင်းသည်။ အရေပြားနဲ့နီးကပ်တယ် ဆောင်းရာသီတွင်မတ်လတွင်နွေးနိုင်သည်။ အဝတ်အထည်တစ်လုံးလုံးကိုချည်နှင့်ချည်မျှင်ဖြင့်ပေါင်းထည့်လိုက်လျှင်ပင်၎င်းသည်ကြီးမားပြီးကြီးမားလွန်းနေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ခါးသည် ပို၍ elastic ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ခါးကိုပိတ်ပြီးအကျိုးသက်ရောက်သည်။
ရှေ့သို့ မိန်းကလေး ၀ တ်ထားသောအကျီ (ရှည်လျားသောပုံစံ) FH20-022
နောက်တစ်ခု: မိန်းကလေး ၀ တ်ထားသောအကျီ (ရှည်လျားသောပုံစံ) FH20-055
Pilted စောင်ဂျက်အင်္ကျီ Mens
Padded Running ဂျာကင်အင်္ကျီ
ပူနွေး Padded ဂျာကင်အင်္ကျီ